फेस्टिभ मुडमा रजतपट ~ The Nepal Romania
फेस्टिभ मुडमा रजतपट
यतिबेला सिङ्गो चलचित्र उद्योग तिहारमा रमाइरहेको छ । तिहार मनाउन सुटिङहरू स्थगित गरिएका छन् । चलचित्रकर्मी फेस्टिभ मुडमा रमाइरहेका छन् । कतिपय हिरोइनहरू भाइटीका लगाउन घर गएका छन् । कतिपयले बुधबार लक्ष्मीपूजा गरे । केही कलाकर्मीले कसरी मनाउँदैछन् तिहार ?
यसपटक बुबाआमा आउनुभएकाले रमाइलो भइरहेको छ । लक्ष्मीपूजाको दिन व्रत बस्दिन । पूजा मात्र गर्छु । मैले बनाएको सेल राम्रो नहुने हुँदा आमाले नै बनाएर पठाइदिनुहुन्छ । अस्ति मात्र, पाथिभरा दर्शन गर्न जाँदा त्यहीँबाट घर सजाउन फूल पनि लिएर आएकी छु । भाइटीका चाहिँ लगाउँदिन । विदेशमा भइने हुँदा भाइटीका लगाएको धेरै भैसक्यो । मेकअप म्यान सन्तु तामाङसँग भाइटीका लगाउने गरेको थिएँ । यसपालि चाहिँ लगाउँदिन । तिहारमा केटाकेटीले देउसीभैलो खेलेको रमाइलो लाग्छ ।
मलाई तिहार एकदमै मनपर्छ । कार्ड खेल्नु मेरो रुचिको कुरा हो । लामो समयपछि दाजु जीवन थापा घर आइपुग्नुभएको छ । उहाँलाई भाइटीका लगाउने घर मोरङको सलकपुर जाँदैछु । मलाई तिहारका परिकारहरू बनाउन र चखाउन निकै मनलाग्छ । यसपटक रमाइलो गर्ने योजना छ ।
घरमा कान्छी भएकीले मेरो काम विभिन्न परिकार खाने र दाजु र दिदीका छोराछोरीसँग खेल्ने मात्र हुन्छ । परिवारसँगै लक्ष्मीपूजा गर्छु । भाइटीकाको दिन राजेशलाई म र दिदी प्रनिता मिलेर टीका लगाउँदैछौं । घरमा देउँसी खेल्न आएकासँग रमाइलो गर्छु । परिवारसँग तास पनि खेल्छु । मलाई सेल पकाउन आउँदैन ।
तीनवर्षदेखि तिहार मनाउने मुड बनाउन सकेको छैन । लक्ष्मीपूजाको दिन घर जान्छु । ममी र म मात्र छौं ।यसपटक सबै सुटिङ छाडेर तिहारकै लागि जोड दिएको छु । ममी रिसाउने हुँदा पनि कामबाट ब्रेक लिएको हुँ ।बहिनी यशोधा तीनवर्षदेखि अष्ट्रेलियामा छिन् । टीका थाप्न पाएको छैन।मेरो लागि सबैभन्दा खल्लो कुरा नै यही हो । तास खेल्दिँन । चिल्लो मननपर्ने हुँदा सेल खाँदिन । देउँसी भैलो पनि मनपर्दैन मलाई त ।
पोखरामा पुगेर लक्ष्मीपूजा मनाउँदैछु । भाइटीकाको दिन बहिनीको हातबाट टीका लगाउने ममात्र भएकोले अलि धेरै उपहार दिनुपर्छ । अन्य दुई भाइको पनि । देउसी भैलो नखेलेको धेरै भइसकेकाले यसपटक भने साथीहरूसँग मिलेर खेल्छु । झिलिमिली हुने हुँदा पोखरा घुम्ने सोच बनाएको छु । आमाले पकाएको सेल हातमा झुन्डाएर खाइन्छ ।
विभिन्न कन्सर्टले तिहारमा व्यस्त हुन्छु । श्रीमतीलाई पूजाआजा र बत्ती बाल्नमा सहयोग गर्छु । परिवार नै बसेर लक्ष्मीपूजा गरिन्छ । घरमा देउसी भैलो खेल्न आएकाहरूले भट्टाएको हेरेर आनन्द लिन्छु । मेरो चार दिदी धरानमा भएकाले आफन्त दिदीबाट टीका थाप्छु । उपहार स्वरुप सबैलाई पैसा दिन्छु ।
यसरी वित्नेछ सेलिब्रेटीको तिहार
दिलदार मौसमी, इज्जत धान्न धीरेनको पारिश्रमिक बढाइद...
बिदा भए 'गडफादर'
प्रमोसनका लागि निरुता काठमाण्डू
'आचार्य' भारतीय कि नेपाली?
एक किसका लागि आठ टेक
दशैंमा औसत व्यापार
सेलिब्रेटीको दशैं खर्च ?
कस्को आँखामा राम्री केकी ?
आर्यनले तिरे बैगुनीलाई गुन !